नाबालिग गायिकासँगको घट`नामा फसेका पल शाहको रोचक दैनिकी, भित्र पनि प्रशंसा ! – Sandes Post
March 30, 2022 568
एक किशोरीलाई क र णी गरेको अभि`योगमा पु र्पक्षका लागि थुनामा हरेका अभिनेता पल शाहको जे ल भित्रको जिव|न कस्तो होला भन्ने कौतुहलता उनका फ्यान`लाई पक्कै छ ।
उनी माथि लागेको आ रोप र अदाल`तको फैस लाले पलका फ्यान भने नि’रास भएका छन् । पलको मु द्दा किनारा नलाग्दा सम्म उनी जे’लमै हुनेछन् । अदा`लतले पललाई जेल मै राखेर अनु सन्धान गर्न निर्देशन दिएको हो । उनलाई अदा लतले जे ल चलान गरेको तीन दिन भएको छ ।
उनी अहिले तनहुँ जिल्ला का’रागारको नयाँ भवनमा छन्। नयाँ भवनमा उनीसंगै २० जना छन् । अन्य भवनमा ३० जना राखिएको छ । पलको धेरै समय आफन्त भेटघा`ट गर्दैमा बित्ने गरेको छ । तर बाँकी रहेको समयमा उनी क्यारेम|वार्ड खेल्छन् का रागार भित्रको लाइब्रेरीमा समय बिताउँछन् ।
उनी का|रागारमा अन्य कै’दीहरुसंग निकै घुल|मिल भएका छन् । पल शाहलाई । ‘बी’ ब्लकमा राखिएको हो । दुईतले भवनको माथिल्लो तलामा सुत्ने र बस्ने व्यवस्था छ भने तल्लो तलामा खाना खाने, खेल्ने र लाइब्रेरी। अन्य कै दीहरुले पलको निकै प्रशंसा गरेको कारागार ब्यवस्थापनका कर्म`चारीहरुले बताएका छन् ।
उनलाई भेट्न जाने नातागोता आफन्तहरूलाई सहजै भेटघाट गर्ने वाता`वरण बनाउन प्रशासनले भनेको छ। बिहीबार जिल्ला अदालतले अभिनेता शाहलाई पुर्प क्ष का लागि कारा गार चला|न गर्न आ|देश दिएको हो। यही मु द्दामा म तियार बनाइएका पलका म्यानेजर कृष्ण जोशी भने अदाल|तले माग गरेको एक लाख रुपैयाँ ध रौटी बुझाएर त्यसै दिन रिहा भएका छन्।
पलविरु|द्ध जिल्ला अदा|लत नवलपुर परासी पूर्वमा पनि क र णी कै मुद्दा दर्ता भइसकेको छ। त्यहाँ थु’नछेक बहस हुन बाँकी छ। त्यसका लागि उनलाई केही दिनमा नवलपुर लगिनेछ। जिल्ला अदा|लत नवलपुरले थुनछेक बहसका लागि पल शाहलाई पठाइदिन पत्र पठाइ|सकेको छ। तर तनहुँ जिल्ला अदा|लतले अहिले`सम्म का’रागारलाई केही भनेको छैन।
अदाल`तबाट आदेश आएपछि उनलाई नवलपुर पठाइदिने जे लर नारायण अधिकारीले बताए। तर जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थु’नामा पठाएको विरुद्ध पल शाहले उच्च अदाल`तमा अपिल गर्ने भएका छन्। उनका का`नुन व्यवसा`यीले केही दिनमै उच्च अदालत पोखरा मा पुनरावेदन दिने बताएका छन्। पल शाहलाई धरौ टीमा रि हा गरेर मु`द्दाको पु र्पक्ष गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
Prevबाबुको टुङ्गो नभएका छोरा जन्माएपछि कांग्रेसकी यी चर्चित सांसद तनावमा !
Nextचन्द्रागिरि केबुल कारमा मानिस झुण्डिएको झुण्डियै भए …